यो नजान्ने मानिस भोजन हरियो टमाटर प्रयोग गर्न अनौठो लाग्न, र वास्तवमा रूसी appetizers साँचो connoisseurs तिनीहरूले पनि वर्ष को कुनै पनि समयमा यो अविस्मरणीय अमिलो र पिरो स्वाद आनन्द गर्न जाडो लागि तयार। साथै, यो धेरै पोषक र ट्रेस तत्व मानव स्वास्थ्य गर्न आवश्यक हो कि को सबै भन्दा ठूलो एकाग्रता संकलित हरियो टमाटर छ।
बाट कावीयार हरियो टमाटर, अहिले आफ्नो ध्यान प्रदान गरिने को नुस्खा, घरेलू खाना बुझ्न जो आफ्नो साँचो लायक Gourmets मा मूल्यांकन गरिनेछ।
त्यसैले, कावीयार को घटक को कुल वजन को एक भाग हुनुपर्छ जो नपाकेको टमाटर, खाना पकाउने लिन। दोस्रो भाग हरियो स्याउ, गाजर, प्याज, र zucchini, बराबर अनुपात लिइएका unsweetened गर्नुपर्छ। सफा र, सबै सामाग्री धुन एक मासु Grinder मार्फत तिनीहरूलाई छोड्न र लगभग दुई घण्टा simmer। खाना पकाउने समयमा, मसला,2चमचा 9% सिरका र स्वाद नुन थप्न गर्नुपर्छ। sterilized जार र Lids मा समाप्त पकवान ukuporte को जाडो अप रोल।
हरियो टमाटर नुस्खा देखि कावीयार, अघिल्लो एक भन्दा एक बिट थप जटिल छ विशेष मसालेदार टिप्पणीहरू साथ पूर्णतया फरक स्वाद छ।3किलो हरियो टमाटर लिन, तिनीहरूलाई राम्ररी धुन र reassemble। तिनीहरूलाई पैन मा राख्नु र 15 मिनेट र त्यसपछि सुन्दर लागि 180 डिग्री मा Bake। थप, टमाटर एक मासु Grinder मा मोड पर्छ, र तिनीहरूलाई संग साफ र धोए गाजर (6 टुक्रा) र4घण्टी खुर्सानी साथै3ठूलो बल्ब सम्झना आउँछ। परिणामस्वरूप, अन्डा, एक ठूलो हत्येदार बरतन मा जोश मसला र सिरका को चमचा को एक जोडी थप्नुहोस्। समय लगभग 15 मिनेट खाना पकाउने, त्यसपछि तयार जार मा ukuporte उसिनेर र तिनीहरूलाई पठाउन एक कोठरी मा वा छिंडीमा मा जाडो सम्म भण्डारण गर्न।
हरियो टमाटर नुस्खा तपाईं अब पढ्ने, र piquant देखि कावीयार, तर कारण विशेष मसला को वाहेक एक पूर्ण बिभिन्न connotation छ। हरियो टमाटर एक किलोग्राम, गाजर को 500 ग्राम ले, स्वाद हरियो खुर्सानी, वनस्पति तेल र नुन को 500 ग्राम, केही मटर allspice र अजवाइन तीन बालाको। टमाटर धो र केही मिनेट लागि पानी उम्लिरहेको पोख्नुहोस्, र त्यसपछि तिनीहरूलाई देखि chapped छाला हटाउन। सबै तरकारी, सफा, धुन र मासु Grinder संग टमाटर मोड। भुट्नु आधा एक घण्टा बारेमा पैन मा अन्डा, कहिले काँही यो हलचल गर्न नबिर्स।
एक गुणस्तर उत्पादन प्राप्त गर्न जोड दिन्छ कि - हरियो टमाटर नुस्खा यसको तयारी र भण्डारण तापमान अनुपालन देखि कावीयार सफल। सबै को सबै भन्दा राम्रो धेरै न्यानो अवस्थामा क्षति तिनीहरूलाई रोक्छ जो सुन्दर Cellars भण्डारण गरिएका workpiece छन्।
जब तालिका मा जाडो हरियो टमाटर को अन्डा प्रकट हुनेछ, आफ्नो घर उत्पादन को नुस्खा अनुसार तयार रूपमा, तपाईं भन्नेछु "धन्यवाद" सधैं स्वादिष्ट बाहिर जान्छ र छिटो मनपर्ने बन्दैछ। हरियो टमाटर को बार विभिन्न तरिकामा तयार छन्, आवश्यक छैन यो कावीयार हुनुपर्छ। विशेष गरी माग अन्य तरकारी यी सस र सलाद आधारमा। खानपान!
वर्णन Greenfinch नुन कसरी र जाडो लागि तिनीहरूलाई खटाई मा हालन
बादाम केक - Gourmets लागि एक मिठाई व्यवहार गर्नुहोस्। तयारी दुई विधि
खरायो क्रीम मा ब्रेज्ड
नासपाती संग पनीर muffins: व्यञ्जनहरु, विशेष गरी खाना पकाउन र समीक्षा
घर sorbet नुस्खा
त्रुटि 728. "Aion" त्रुटि 728: के गर्ने?
नेटवर्क बारहरू "वाइन बजार"
सन्देश "VKontakte": "सर्भर अस्थायी रूपमा उपलब्ध छैन।" दिइएको अवस्थामा के गर्न समस्या वा के को कारण
प्राविधिक संरचना भनेको के हो? विवरण। थ्योरी